कुटीमा बस्दै आएकी सन्यासी माईरामनी एक महिनाअघि यस्तो अबस्थामा भेटेपछी ‘बाबा’लाई कुटीमा प्रवेश निषेध – List Khabar
Home / समाचार / कुटीमा बस्दै आएकी सन्यासी माईरामनी एक महिनाअघि यस्तो अबस्थामा भेटेपछी ‘बाबा’लाई कुटीमा प्रवेश निषेध
कुटीमा बस्दै आएकी सन्यासी माईरामनी एक महिनाअघि यस्तो अबस्थामा भेटेपछी ‘बाबा’लाई कुटीमा प्रवेश निषेध
admin2weeks ago समाचार Leaveacomment 141 Views
काठमाडौंमा घर भएको र बैंकमा जागिर खानु भएको 30 वर्षको अविवाहित कन्या केटीको लागि बिबाह गर्ने केटा चाहियो।
१ लाख रुपैयाँसम्मको छुटमा किन्ने होइन त या’माहाको बाइक र स्कुटर ? यस्तो छ नयाँ मूल्य
अमेरिकाको सपना देखाएर फेसबुकमा पर्यो लभ, गरे विहे तर ….
-सिरहाको कर्जन्हा नगरपालिका १ बल्टिया कुटीका बाबा (महन्थ) लक्ष्मीनारायण यादवलाई स्थानीयले नि’षेध गरेका छन् । कुटीको सम्पत्ति ह’डप्न खो’जेको, कुटीमा बस्दै आएकी ७० वर्षीया सन्यासी माईरामनीको ह’त्या ग’रे’को भन्दै स्थानीयले बाबालाई अब कुट्टीमा बस्न नदिने अडान राखेका हुन् ।
कुटीमा बस्दै आएकी सन्यासी माईरामनी एक महिनाअघि पा’सो ल’गा’ई झु’ण्डिएको अवस्थामा फेला परेकी थिइन् । स्थानीयले भने बाबाले नै ह’त्या ग’रे’को आरोप लगाउँदै आएका छन् । महिला सन्यासी मृत घटनापछि आक्रोशित स्थानीयले बाबालाई कुटी प्रवेशमा रोक लगाएका हुन् ।
घटनापछि प्रहरीले बाबालाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । आ’त्मह’त्या भएकोले उनलाई आवश्यक परेको बेला उपस्थित हुने शर्तमा तारिखमा छोडेको छ । बाबालाई प्रहरीले छोडे पनि स्थानीयले कु’टीमा प्रवेश दिएका छैनन् ।
बाबालाई कुटीमा स्थापित गराउने विषयमा मंगलबार प्रहरी, स्थानीय र बाबा पक्षबीच वार्ता गर्न बाबाजी कुटीमा आए पनि स्थानीयले बस्न दिएनन् । कुटीमा बसेर छलफल गर्ने अवस्था नभएपछि प्रहरीले घेरा हालेर बाबालाई गाउँबाट निकालेको थियो ।
बाबालाई निकाल्ने क्रममा प्रहरी र स्थानीयबीच झ’ड’पसमेत भएको थियो । झडप नियन्त्रण गर्न प्रहरीले अश्रुर ग्यास र प्लाष्टिकका गो’ली प्र’हा’र गरेको कर्जन्हा नगरपालिकाका उपप्रमुख ज्ञानु श्रेष्ठले जानकारी दिइन् । झ’ड’पको क्रममा दुई प्रहरी र दुई स्थानीय घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
कर्जन्हाका मेयर गंगा पासवानले बाबाको विषयमा कर्जन्हा नगरपालिकामा छानविनको लागि निवेदन परेको बताए । उनले भने, ‘बाबाको विषयमा नगरपालिकाको न्याय समितिमा निवेदन परेको छ, त्यहाँको छलफलले के गर्छ त्यहीँ अनुसार अगाडि बढ्छौं ।’
यता बाबा लक्ष्मीनारायणले आफ्ना गुरु महन्थ हरि दासले आफ्नो नाममा रहेको ६ विघा १० कठ्ठा जमिन आफ्नो नाममा गरेको बताए । सोही जमिनमध्ये केही जमिन मन्दिर बनाउँदा परेको ऋण तिर्नलाई बेच्न खोज्दा वडाध्यक्ष मोहन शाहीले भाग खोजेको आरोप लगाए । जमिन बेच्न सिफारिस लिन जाँदा वडाध्यक्षले केही जमिन वडालाई पनि दिनुपर्ने शर्त राखेको बाबाको भनाइ छ ।
यता वडाध्यक्ष शाहीले कुटीको जमिन भएकोले स्थानीय गाउले र स्थानीय सरकारको मन्जुरी बेगर चलाउन नपाउने बताए । स्थानीयले भने बाबाले घरपरिवार र आफन्तलाई राखेर कुटीलाई निजी ढ’ङ्ग’ले प्र’योग ग’रे’र ह’ड’प्न खो’जिरहेको आरोप लगाएका छन् ।
Previous नेहा कक्कडको जीवनमा फे’री के भयो ? यसकारण अचानक ‘इन्डियन आइडल’वाट गा’यब भएकी रैछन्
Next श्रीमान राज कुन्द्रा जेलमा भएको बेला शिल्पा शेट्टी घरमा भित्र्याईन नयाँ सदस्य, सामाजिक संजालमा आयो गालीको वर्षा
कलंकी जाने भनेर मोटरसाइकलमा लिफ्ट मागेकी युवतीले जब चोभार पुर्‍याइन् र त्यसपछि…
काठमाण्डौ । कुनै सुन्दर युवतीले लिफ्ट मागिन् भनेर मख्ख पर्दै लिफ्ट दिँदा समस्यामा पर्न सकिन्छ …
भोलि असोज ९ गते शनिबार, शुभ-अशुभ कस्तो रहला तपाईंको दिन? हेर्नुहोस् दैनिक राशिफल !
किन परपुरुषसँग अवैध सम्बन्ध राख्छन् विवाहित महिलाहरु
यी ७ ब्यक्तिको घरमा भूलेर पनि कहिल्यै नखानुहोस् खाना, नत्र हुनसक्छ पछुतो